बिहानै आँचलको होस उड्यो, श्रीमान उदिपकी प्रेमिका बच्चा सहित आइन् [भिडियोसहित] – News Np Online
नेपालगञ्जमा स्कुलमा बिद्यार्थी पड्दै गर्दा नजिकै देखिएको दृश्यले बिद्यार्थी र शिक्षक् हैरान !
मुख्य पृष्ठ /Video/बिहानै आँचलको होस उड्यो, श्रीमान उदिपकी प्रेमिका बच्चा सहित आइन् [भिडियोसहित]
बिहानै आँचलको होस उड्यो, श्रीमान उदिपकी प्रेमिका बच्चा सहित आइन् [भिडियोसहित]
पोखरा । नवबिबाहित अभिनेत्री आँचल शर्माका लागि अत्यन्तै दुखद खबर आएको छ । उनले भर्खरै मात्र डा. उदिप श्रेष्ठसँग धुमधामका साथ बिबाह गरेकी थिइन् । त्यो निक्कै गसिप बनेको थियो । उनीहरुको बिबाहमा देखिएको तडक भडक देखि पुर्व प्रेमिकाको बारेमा हिजो आज निक्कै चर्चा भईरहेको छ । करिब एक वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई उनीहरुले केहि साता अगाडी मात्र विवाहमा परिणत गरेका हुन् । निक्कै हुने खाने परिवारका यी दुवैले आफ्नो विवाहमा राम्रै खर्च गरेका थिए । स्टार होटेलमा रिसिप्सन देखि हेलीकप्टरमा गरिएको सवारीले फिल्मी नगरीमा एउटा तहल्का नै मच्चायो ।
यी दुइजना नया जीवन सुरु गर्दै गर्दा अर्को गसिपले पनि बजार तातिएको छ । हुनत उदिप श्रेष्ठले स्वीकारी सकेका छन । उनको पुर्व प्रेमिकाको बारेमा बोलिसकेका छन । उनको पहिलो प्रेमिका भने फिलिपिनी हुन् । दोस्रो प्रेमिका भने नेपाल कै हुन् । ति नेपाली प्रेमिका अरु कोहि नभएर नेपाल कै चर्चित भलिवल खेलाडी तथा नायिका सिपोरा गुरुङ्ग हुन् । उदिप श्रेष्ठले सार्बजनिक रुपमै नाम नलिएपनि सिपोरा गुरुङ्गले भने यस अघि नै नेसनल टेलिभिजनमा यो कुरा सार्बजनिक गरेकी थिइन । उनले आफ्नो प्रेमी उदिप श्रेष्ठ मात्र भनेका छैनन् पहिलो र अन्तिम प्रेमी पनि उनि नै हुन् भनेकी छन ।
यसै बीच उदिपको पुर्व प्रेमिका भनिएकी फिलिपिनी युवतीको तस्विर सामाजिक संजालमा सार्बजनिक भएको छ । प्रेमिकाको मात्र हैन तस्विरमा एउटा शिशु पनि देखिन्छ । तर ति शिशु उदिप र उनको प्रेमिका कै हो वा अन्य कसैको हो भन्ने भने स्पष्ट छैन । जुन शिशुसंग उदिप पनि संगै छन । तस्विर कहा कसले सार्बजनिक गर्यो त्यो भने खुलेको छैन । तर रिलेसनसिपमा मात्र रहेको बताउने उदिपलाई यो तस्विरले फेरी टाउको दुखाएको छ । पोखराबाट सञ्चालित समाचारपाटी डक कमले यो तस्विर सार्बजनिक गरेको हो ।
नेपाली सिने जगतका कलाकारहरुको नौटंकी(साम्राज्ञीले युट्युब र मिडियामा अन्तर्वार्ता नदिने घोषणा गरिन : बैज्जत हुने डर किन? (भिडियोसहित)
अभिनेता सुशान्त सिंह आफ्नै घरमा यस्तो अवस्थामा फेला परे, घरमा देखिएको यो दृश्य हेर्नुहोस
यसरी बस्यो १६ बर्षे बालिकाको पेटमा बच्चा , अन्तत: आफैले भनिन् कस्ले गर्यो यस्तो (भिडियो सहित)